Fa maninona aho no mihavesatra tampoka? - Fanazaran-Tena
Tena > Fanazaran-Tena > Maninona aho no mahazo lanja - vahaolana azo ampiharina
Maninona aho no mahazo lanja - vahaolana azo ampiharina
Fa maninona aho no mihavesatra tampoka?
Mitombo lanjaary ny fiovaovan'ny toetr'androlanjamety hitranga amin'ny karazanaantony. Olona maro miandalanamahazo lanjarehefa mihantitra izy ireo na manova ny fomba fiainany. Na izany aza, hainganamitombo lanjadia mety ho mariky ny toe-pahasalamana ifotony, toy ny olana amin'ny tiroidia, voa, na fo.
Nahazo pounds vitsivitsy nandritra ny fialantsasatra? Uh, tsy maninona. Iza no miraharaha raha niova kely ny tarehinao? Eny, halako ny mampianatra anao, fa ny mavesatra loatra dia tsy manova ny haben'ny patalohanao fotsiny, fa betsaka kokoa ho an'ny Vatanao izany mihoatra ny noeritreretinao azy, ary betsaka amin'ireo fahavoazana ireo no mety hiseho afaka 90 andro monja! Raiso, ohatra, 1.
Fihetseham-po mahatsikaiky Ity no iray amin'ny zavatra voalohany mitranga amin'ny vatanao rehefa manomboka mihinana matetika ianao. Raha ny marina dia afaka manomboka hatramin'ny volana voalohany izy io. Mety ho somary mifanipaka kely izany - maninona ianao no tokony hihinana bebe kokoa rehefa very ny fahatsapanao? Mamelà ahy hanazava.
Ny fanadihadiana dia naneho fa ny fihenan-tsakafo dia mampihena ny mpandray tsiro amin'ny 25% dia midika fa ny fihinana sôkôla nohaninao iray volana lasa izay dia nandefa anao tany amin'ny lanitra siramamy nandritra ny fotoana fohy, saingy androany dia tsapanao fa ilaina ny mandany ny bar iray manontolo, hiaina ilay tsirony manan-karena mitovy. Ary manomboka amin'izany ny tsingerin'ny faharatsian'ny fihinana 2.
Migraines matetika, Marina izany, ireo aretin'andoha be izay mahatonga ny asa andavanandro saika tsy ho vita intsony dia afaka manomboka haingana isaky ny manimba ny andronao toy ny indray mandeha isan-kerinandro. Mariho anefa fa ny hatavezina dia tsy voatery miteraka migraines. Iray amin'ireo lozisialy mety hampidi-doza ny migraines izany.
Ny fahaverezan-danja loatra dia midika hoe mety hampidi-doza anao kokoa ny migraines fanaintainana noho ny olona manana lanja mahasalama kokoa, ary raha marary an-doha ianao, dia mety ny manakalo izany soda mamy ho an'ny rano iray vera mandritra ny sakafo atoandro izany ary jereo izay mitranga . Ho gaga ianao! 3. Kolesterola 'ratsy' ambony kokoa Ny teny hoe 'kolesterola' dia saika nanjary mitovy dika amin'ny hatavezina sy fitomboan'ny lanjany haingana, fa tsy hoe mainty sy fotsy.
Tena mila kolesterola ny vatanao hananganana sela salama! Toy ny ankamaroan'ny zavatra eo amin'ny fiainana: ny be loatra dia tsy tsara, midika izany fa ny fihinanana ireo sakafo matavy matsiro ireo matetika dia hitarika fanangonana tahiry matavy ao amin'ny lalan-dranao. Ho voasakana ny lalan-dranao avy eo, manakana ny fonao tsy hahazo oksizena ampy.
Izy io koa dia mitarika fihenan'ny fikorianan'ny rà mankany amin'ny atidoha. Raha hametraka izany amin'ny teny laika, ny loza mety hitranga amin'ny aretim-po na ny lalan-drà dia lasa avo kokoa. Fantatro fa matsiro ny burger, fa tena mendrika ve izany? 4.
Ny fikarohana momba ny famoizam-po sy fitaintainanana dia naneho fa misy fifandraisana matanjaka eo amin'ny fitomboan'ny lanja sy ny fahasalamana ara-tsaina. Ny olona matavy dia 55% kokoa mety hiteraka famoizam-po sy fitaintainanana noho ny olona manana BMI salama kokoa. (Ity no fanondroana masin'ny vatanao - izy io dia refesina amin'ny ankapobeny ny haben'ny tavy amin'ny vatana.) Ary ny tena mampalahelo dia ny lehilahy koa mety voan'izany, ny vokany ara-psikolojika dia manan-danja kokoa amin'ny vehivavy.
Nahoana araka ny eritreritrao no marina izany? Ampahafantaro ahy amin'ny hevitra! Te handre ny eritreritrao momba an'io aho. Na eo aza izany, manana boribory ratsy fanahy indray isika: kivy ianao mba hahatonga anao hihinana sakafo matotra, avy eo mihombo ny lanjanao ary mahatsapa ho ratsy kokoa ianao noho izany, sns 5.
Olana bevohoka ary ity misy olana iray hafa: Ny vehivavy dia tsy maintsy miatrika fihenan-danja noho ny andilana mifandray amin'ny s sambatra kokoa Fa ireo horonana fanampiny ireo dia mety ho antony mahatonga anao hanana olana amin'ny fitondrana vohoka rehefa nanandrana ianao. Ny BMI avo dia mitarika amin'ny tsy fandanjana hormonina sasany izay misy fiantraikany amin'ny atody vehivavy ary miteraka tsy fiterahana. Averina indray, toy ny migraines, tsy ny hatavezina irery no meloka raha resaka olana saro-piterahana, fa mety ho anton'izany! Oh, ary ry havana, ny matavy loatra dia tsy tsara loatra ho an'ny rafitra fiterahana lahy! Ny fahaverezan-danja loatra dia mety hiteraka tsy fahampian'ny vitamina D.
Fantatra amin'ny anarana hoe 'vitam-masoandro', tena ilain'ny vatanao izy io mba handraisan'ny taolana anao kalsioma ary hatanjaka. Izy io koa dia manampy amin'ny fisorohana ny aretina autoimmune sy ny fanaintainana maharitra. Bonus, miady amin'ny famoifoizana koa izy io.
Eny, eny, ny 'D' dia midika hoe 'Atao daholo ve izany!' (Tsia, noforoniko fotsiny izany.) Na izany na tsy izany, rehefa tsy ampy vitamina D ny vatanao dia afaka mahatsapa fanaintainana hozatra ianao na aiza na aiza. Mampalahelo fa ny fanampiana fanafody vitamina sy ny fandaniana fotoana bebe kokoa amin'ny masoandro dia tsy hanampy anao amin'izany; tavy matavy be loatra no handrendrika ilay vitamina mba tsy hoentin'ny vatana.
Ka tsy misy lalan-kivoahana mivoaka mora, mila mihena ianao mba hahafahan'ny vatanao mandray ny otrikaina majia tena ilaina! 7. Ny torimaso ratsy dia mety hampiato anao ara-bakiteny raha matory ianao ary imbetsaka mandritra ny alina! Mampatahotra izany! Ity aretina ity dia fantatra amin'ny anarana hoe sleep apnea ary mitranga rehefa voabahana ny lalan-drivotra ambony na dia mandritra ny torimaso aza, izay mety hiteraka fihenan'ny rivotra na hampiato azy tanteraka. Inona no afaka manakana azy io mety ho tavy matavy loatra manindry ny tadin-drivotrao.
Soa ihany fa rehefa tapaka ny fikorianan'ny rivotra dia manaitra ny vatana ny ati-doha, saingy midika izany fa ny fisian'ny olana amin'ny torimaso mandritra ny alina dia mampiroborobo ny lanja, izany hoe ny tsy fahampian'ny torimaso dia mety hitarika fitomboan'ny lanja! Ary eo indray: ity faribolana ratsy fanahy ity manangana ny lohany ratsy tarehy indray.
Ny ratsy indrindra, ny torimaso ratsy ataonao dia mety hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny torimaso an'ny namanao koa! Fa ny tena izy, ny elatra narro amin'ireo làlambe dia matetika mitarika amin'ny fofona mafy ihany koa. Ary eo ianao no manana azy. Izay mizara ny fandrianao dia afaka mifoha mandritra ny alina noho ny fofonainao.
Toa tsy rariny kely ve sa ahoana? 8. Mandehana any amin'ny Toilet matetika Mety te hanomboka mitady fitsangatsanganana matetika any an-kabone ianao satria io dia mety ho mariky ny aretin'ny voa. Ary eny, ny fikarohana dia mampiseho fa azo ampifandraisina amin'ny lanjany be loatra izany.
Hitan'ny Oniversiten'i Kalifornia fa ny olona matavy loatra dia mety iharan'ny tsy fahombiazan'ny voa, izay avo 7 heny noho ny an'ny olona manana lanja mahasalama. Tsy midika izany fa mila mivoaka any ianao ary manandrana mamoy lanja ampy hifanarahana amin'ny habe aotra, aleo ho tena eto! Fa misy antony iray hafa hikarakarana ny vatanao sy ny fahasalamanao! 9. Fiovana ao amin'ny ADNanao Teraka miaraka amin'ny fototarazonao ary tsy afaka miova izany.
Fa minoa azy na tsia, ny fomba fiainanao dia mety hisy fiantraikany amin'ny ADNanao! Izay farafaharatsiny ny hevitry ny mpahay siansa avy amin'ny Ivotoerana Fikarohana momba ny fahasalaman'ny tontolo iainana. Ity fiovana ity dia mety hiteraka risika mitombo diabeta karazana k tsy ho an'ny olona iray ihany fa ho an'ny zanany koa! Tena mampatahotra izany! Amin'ny lafiny tsara, misy zavatra azonao atao amin'izany! Fa misimisy kokoa momba izany eto. Mbola misy zavatra iray hafa azontsika atao amin'ny vatana matavy loatra 10.
Mety hampidi-doza kokoa ny homamiadana raha toa ka tsy ampy ny antony hafa rehetra hitaomana olona hanana fomba fiaina mahasalama dia angamba hitondra any an-trano io hevitra io. Eny, be dia be ny karazana homamiadana ateraky ny zavatra samihafa, tsy ny fahazaran-dratsy sy ny fomba fiainana ratsy ihany. Na izany aza, ny zava-misy dia nanaporofo ny fandalinana tsy tambo isaina fa ny fanaovana safidy tsy mahasalama dia mety hampitombo ny mety ho voan'ny homamiadana ary tsy ankanavaka ny tsy fihinanan-tsakafo, tsy manome antoka fa ho voan'ny homamiadana ny olona iray, fa mampiakatra be ny vintana.
Izao no fotoana itoriana ny vaovao tsara! Misy vahaolana tsotra momba ny hatavezina, ary tsy miafina akory izany. Haintsika rehetra ny miady amin'ny fahazoana lanja: mihinana salama ary manomboka manao fanatanjahan-tena. Saingy tsy milaza aho hoe mila mosarena ny tenanao na mihazakazaka amin'ny Marathon New York City manaraka.
Ny fankafizanao ny fahatsapanao ho meloka ankafizinao indraindray dia tsy heloka. Aza ferana afa-tsy amin'ny siramamy sy sakafo matavy isan-kerinandro dia manandrana mihinana voankazo sy legioma vao haingana. Fetsy tsotra ihany koa ny fisotroana rano ampy.
Manamboara rano iray vera alohan'ny hisakafoanana. Ankoatry ny lanja, ny fihinanana sakafo mahasalama dia mahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny ankapobeny. Hanana angovo bebe kokoa ianao, hatory tsara kokoa ary hanana toe-tsaina tsara kokoa! Manomboka kely; aza mandratra tena amin'ny fanerena mafy loatra; atombohy amin'ny diabe isan'andro na manaova kilasy yoga ho an'ny vao manomboka.
Ny fampihetseham-batana sy ny fihenan-danja dia miteraka hormonina antsoina hoe serotonin, izay mahasambatra anao kokoa, koa tsy ny zavatra hitanao eo amin'ny fitaratra ihany no ho tianao, fa ho salama tsara ihany koa ianao. Atambaro izany amin'ny fiatraikany mampihetsi-po amin'ny sakafo mahavelona dia tsy ho voasakana ianao! Ka izao no fomba ahafahanao manapaka ny fihodinan'ny fahazoana lanja amin'ny alàlan'ny fanaovana ireo ranom-boankazo hikoriana am-pifaliana ireo! Ianao na olona fantatrao? Efa niainanao ve ny iray amin'ireo soritr'aretina mitombo? Azafady zarao amin'ireo soso-kevitra etsy ambany ireo soso-kevitrao! Aza adino ny mankafy an'ity lahatsoratra ity, zarao amin'ny namanao, ary kitiho ny bokotra 'Subscribe' raha tsindrio eto, mijoroa amin'ny lafiny mamirapiratra amin'ny fiainana!
Fa maninona aho no manome lanja rehefa mihinana kely kokoa aho?
Ny fatiantoka kaloria dia midika fa mihinanavitsykaloria avy amin'ny sakafo sy zava-pisotro noho ny ampiasain'ny vatanao hitazona anao ho velona sy hiasa. Misy dikany izany satria lalàna fototra momba ny termodinamika: Raha manampy angovo betsaka noho izay andaniantsika isika diamahazo lanja. Raha manampy isikaKely kokoaangovo noho ny andaniantsika dia very isikalanja.22 Apr 2017
Nolazaina taminay fa tsotra ny fahaverezan'ny lanja, mila mandrehitra kaloria betsaka kokoa ianao mihoatra ny andanianao fotoana amin'ny faha-20 taonako ary tamin'ny fotoana naha-30 taona ahy dia nitebiteby tamin'ny fomba ofisialy aho, fa ny zavatra hampianariko anao amin'ity lahatsoratra ity Ity no momba an'ity lahatsoratra ity. Tamin'ny farany, ity farany dia nanampy ahy hanova ahy hahatratra ny fihenan-danja maharitra sy maharitra, ary raha ny marina dia very 50 pounds tao anatin'ny enim-bolana mahery tamin'ny 2016 ary notazoniko hatry ny ela satria te-hanomboka ity Idea momba ny fifandanjan'ny angovo ity aho hiresaka momba ny kaloria laninay ary ny kaloria entintsika mba hahafahan'ny olona mitana lanja ara-dalàna mihinana betsaka ny kaloria ilaina amin'ny fampihetseham-batana ataon'izy ireo , ary ny olona iray milanja lanja dia mihinana kaloria betsaka kokoa noho ny mandrehitra amin'ny fahitana voalohany ary hafatra tsotra mahafinaritra izay mitondra antsika am-pitiavana amin'ny fehin-kevitra, tokony handeha isika Wayne mandoro kaloria bebe kokoa noho ny laninao na amin'ny fomba hafa : tsy dia manao fanatanjahan-tena, betsaka kokoa, fa ho anao be dia be s ity fomba ity dia tsy namokatra ela - vokatra mitohy amin'ny fihenan'ny lanja sy ny antony mahatonga izany hatrany hatrany Raha tsy mahomby ianao dia tsy zava-miafina amin'ny mpahay siansa izany - ny vatanao - tsy fantatry ny vatanao fa misakafo ianao, tsy ' Fantatrao fa manandrana mamoy lanja ianao, mety hieritreritra koa ianao fa sendra any amin'ny nosy efitra ary ny vaovao tsara dia hoe tafahitsoka ao amin'ny nosy efitra ianao ary manana fomba hiatrehana izany hitanao fa ny razambenao dia ny sisa velona dia ianao no vokatra farany avy amin'ireo rojom-bolo tsy misy tapaka lava raha mahita an'io avy any an-dafiny ianao, vaovao ratsy izany satria mafy orina mafy ianao mba hahatanty ny fihenan-danja mba hahazakananao izay tena tadiavinao hatao. amin'ny alàlan'ny fameperana kaloria ary eny, hihena ianao mandritra ny tapa-bolana dia ho very tavy ianao ary indrisy fa very koa ny hozatry ny hozatrao matavy ny vatanao hanomboka hiady aminao, hitahiry angovo ianao mety ho mangatsiaka ny metabolisma anao dia milatsaka lalindalina kokoa. lasa sarotra ara-batana kokoa ho anao ny fandehanao any amin'ny gym ny tahan'ny fandoroana tavy anao satria tokony hitahiry izany ianao mba hahavelomanao ny kaloria izay nihetsika tsara isan'andro isan'andro dia hanomboka hihena, mety hijanona aza izy ireo, tsy fahita firy ho an'ny olona manao fanatanjahan-tena mitovy tanteraka sy mihinana mitovy ny habetsany mba hahazoany lanja tokoa, ary izany dia satria ny vatanao iray manontolo dia mitahiry angovo ary mihamangatsiaka ianao hoy ny ati-doha aminao ary mekanika velona izy io, ny atidohanao dia milaza aminao ny hampifantoka ny herinao manontolo amin'ny fihinanana sakafo toy ny sakafo hitanao fa hidiranao ny mihinana amin'ny fotoana sasany manomboka mieritreritra ny olona fa io no tena ifantohanao isaky ny mifoha ary ireny fotsiny no resim-piainanao sy ho an'ny olona maro. ity no teboka tapitra ny sakafo, mety ho iray volana Mety maharitra enim-bolana fa matetika ianao dia hanomboka ity dingana ity raha vantany vao vita ny fihinananao lanja indray ary mihabetsaka ny ankamaroan'ny olona very izy ireo ary tsy nanana tanjaka hisintomana ny tenanao dia tsotra very lanja fotsiny Mila mitazona fatiantoka kaloria mandritra ny fotoana maharitra, fa manapa-kevitra ianao fa amin'ny manaraka hanao tsaratsara kokoa, manana finiavana bebe kokoa ianao , ka atombohy indray ny sakafonao amin'ny manaraka, fa ny tena zavatra mitovy dia hitranga amin'ny manaraka ary indrisy fa hitohy ihany ny tsingerina fa izao dia fantatrao fa tsy mitovy amin'ny fameperana ny kaloria fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny fihinanana sakafo na fanaovana fanatanjahan-tena, na amin'ny fanaovana roa, manetsika fotsiny ireo mekanisma velona velona razana mafy fo ary afaka andro vitsivitsy aorian'ny volana vitsivitsy dia hiverina amin'ny toerana mitovy ianao indrisy fa ny hevitra iray manontolo ny kaloria amin'ny kaloria dia iray manamaivana indrindra hoy i Albert Einstein nilaza fa tokony hatao tsotra daholo ny zava-drehetra. araka izay azo atao fa tsy tsotra kokoa, ary ny fieritreretana ny fihenan'ny lanja sy ny fiakarana lanja ary ny fifandanjana angovo fotsiny amin'ny resaka fihinanana kaloria sy ny fihinanana kaloria dia fanatsorana be loatra ny olana iray sarotra kokoa, saingy eo dia karazana eritreritra hafa momba ny fihenan-danja sy ny fihenan'ny lanjan'olombelona izay mifanaraka amin'ny fomba fiasan'ny vatantsika. Mila miresaka momba ny hormonina isika.
Ny hormonina dia ao anatin'ny rafitry ny fandefasan-kafatra milaza ny fifandraisan'ny vatantsika amin'ny tenany. Ireo dia simika izay nalefa ho hafatra avy amin'ny toerana iray ao amin'ny vatana mankany amin'ny iray hafa izay tsy isalasalana fa nahita hormonina maro isan-karazany ianao, ohatra ny hormonina tiroida novokarina tao amin'ny tendany, novokarina nanerana ny vatantsika ary izay mifehy ny hafainganan'ny metabolisma. Ny testosterone sy ny estrogen dia ny hormonina firaisana melatonin ilay hormonina manampy antsika matory isan'alina ary mazava ho azy ny insuline hormonina novokarina tao amin'ny sarakaty izay manampy amin'ny fifehezana ny haavon'ny siramamy ao anaty ao ary dia ny insuline no tiako hifantohana anio. Voalohany, andao hieritreritra ny zava-mitranga rehefa manome insuline isika olombelona, ​​izay ataontsika dokotera amin'ny fotoana rehetra, omentsika ny diabeta ny vokatry ny fitsaboana insuline dia ny fiakarana lanja ary anontanio izay marary efa napetraka amin'ny insuline izay ny lafy lehibe indrindra vokany izay efa niainany ary azoko antoka fa ny ankamaroan'izy ireo dia hilaza aminao ny fitomboan'ny glucose amin'ny ra noho ny tavy azontsika atao ny mieritreritra ny insuline ho toy ny hormonina fitehirizana ka mieritreritra ny mifanohitra amin'ny olona manome Insulin Andao hieritreritra izay mitranga rehefa esory ny insulma mmm, toa hadalana kely izany, fa ny zava-mitranga amin'ny diabeta karazana 1 dia tampoka tampoka dia mahazo tsy fahombiazan'ny pankreas ianao hanaovana insuline ary izany dia satria fantatrao fa mirongatra ny soritr'aretina mahatsiravina ho an'ny vatana. manomboka mangetaheta tampoka ianao satria manomboka misosa tampoka tampoka ary mety hianjera amin'ny koma dia tena toe-javatra tena ratsy tokoa, fa ny iray amin'ireo zavatra hafa dia ny fihenan-danja.
Topazo maso ity sary manan-tantara an'ity zazavavy kely vao voan'ny Diabetes Type 1 ity - mbola tsy nanomboka fitsaboana insuline izy, efa-bolana taty aoriana, ny sary eo ankavanana dia efa-bolana aorian'ny fitsaboana ao anatin'ny faritra rehefa io sary io nalaina aho Heveriko fa ity sary ity dia mampiseho mazava tsara ny vokatry ny tsy fahampian'ny insuline amin'ny fihenan'ny lanjany havia ary koa ny zava-mitranga rehefa manome insuline isika mba hahazoana lanja amin'ny vatana. Raha misy ohatra maro hanehoana an'io, mety manana fivontosan'ny pankreatic ianao izay miafina loatra insuline be dia be ary mampitombo lanja ny olona, ​​amin'ny ankapobeny, ny fanafody omentsika izay mandrisika ny sarakaty hamokarana insuline bebe kokoa dia miteraka fihenan-danja ary raha diabeta karazana 1 dia ny insuline mihitsy no tsy mamorona ny tenany ka ambany izy tahan'ny insuline ho an'ny Rehefa miverina ny insuline dia hihena ny lanjany, satria ny insuline dia ao am-pon'ny fitomboan'ny lanjan'ny vatantsika, tena ilaina tokoa izany mba hahatakarana ny fomba tena ahafahantsika mampihena ny lanja ao mba hampiroboroboana ny insuline avo lenta mandritra ny fotoana maharitra mba hampirisihana ny fitomboan'ny lanja sy ny tahan'ny insuline ambany dia mamela ny vatantsika hanana lanja Fandraisana amin'ny saborantsika, izay loharanon-kery lehibe ho an'ny vatantsika. Raha fantatrao izay vao nianaranao dia tiako ianao manontany tena hoe avy aiza ny kaloria, azo jerena avy amin'izany fa ny fifehezana ny haavon'ny insuline dia zava-dehibe kokoa rehefa mieritreritra ny fihenan'ny lanjany noho ny mifehy ny fatran'ny kaloria raha mametra ny kaloria dia mety hahomby mandritra ny fotoana fohy, dia tsy dia mitarika vokatra maharitra izay nanampy ahy hiala tamin'ny sakafo yo-yo nandritra ny faha-20 taonako mba hahavery tena lanja sy hitazona azy io mandritra ny fotoana maharitra.
Miverina amin'ny 2016 ary matoky aho fa hanampy anao koa ny fahazoana, hizara aminao ireo zavatra 5 manan-danja indrindra arosoko mba hitazomana ambany ny tahan'ny insulina izay hanampy anao hanary lanja voajanahary Duration tsy azo tanterahina ary tazomy ny lanja, raha hitanao fa amin'ny ho avy ary efa navoakako ilay lahatsoratra dia hozaraina eto aho dia hametraka rohy mankany aminy etsy ambany ary hisy rohy mankany aminy eo amin'ny faran'ny lahatsoratra koa aza adino ny mamely ny bokotra famandrihana etsy ambany, tsindrio ny lakolosy raha te hampandrenesina ianao rehefa mandefa lahatsoratra vaovao aho ary antenaina fa hahita anao amin'ny herinandro ambony
Ahoana no ahafahako mijanona tsy mahazo lanja?
MijanònaMiezahaLanjaamin'ny alàlan'ny fanovana kely
Mihinana cookies roa kely kokoa.
Hamafa ny hetahetanao amin'ny rano mamirapiratra na fisotro zava-pisotro mamy fa tsy zava-pisotro mamy.
Mametraha sakafo vitsivitsy eo amin'ny loviao.
Tazomy amin'ny sandwich anao ny mayonnaise na fromazy.
Miova amin'ny ronono tsy misy tavy.
Salama daholo, Alarobia izao ary midika izany fa ao amin'ny tranonkala aho ary raha ato amin'ny youtube aho amin'ny herinandro ambony amin'ny alarobia fa ho eo amin'ny tranokala ihany koa aho ary raha misy fanontaniana tianao hapetraka dia mankanesa ao amin'ny katimorton.com, ambanin'ny inona ity? Tsy haiko akory hoe inona no iantsoana azy, toy ny lahatsoratra bilaogy, oh community plus, ary avy eo dia midina mankany amin'ireo forum misy ny vondrom-piarahamonina aho ary manindry ireo forum misy ny vondrom-piarahamonina, ary avy eo dia manontany sy mamaly ireo lahatsoratra aho. Ta da ary azonao atao ny mametraka ny fanontanianao ary mety hamaly amin'ny Q&A manaraka amin'ny Alarobia.
Ny fanontaniana anio dia fanontaniana azoko foana, ka nanapa-kevitra aho fa tsy hamaly fanontaniana iray fotsiny androany ary fantatro fa tena mahasosotra izany nefa manantena aho fa hamaly izany ny fanontaniana izay noeritreretin'ny maro taminao ary tsy nametraka fotsiny ianao ary io fanontaniana io dia fanampiana, sitrana aho ary nitafy lanja aho satria hitranga izany nefa izao, vao mainka manome lanja ahy izy ireo. Mandra-pahoviana intsony aho no tokony hahazo lanja? Hanao lanja ihany ve aho mandra-pahatongako? Mitodika any amin'ny kotrana aho ary tapitra ny fiainako? Tsia, OMG, um, okay? Manana izany ahiahy izany isika rehetra, ary maro ny olona manahy ny ho sitrana indray noho io antony io, satria mihombo ny aretin-tsakafo ary milaza amintsika ny momba ny fako, ary ny valiny fohy, raha toa an'i Kati ianao, raha manana dimy segondra ianao inona araka ny hevitrao no valiny tsia. Tsy vitan'ny hoe hitombo lanja ianao.
Tsy matavy loatra ny olona raha tsy mihinana tafahoatra na manao fanatanjahan-tena. Fantatro izao fa amin'ny maha-mpitsabo aretin-kozatra sakafo ahy dia tsy tokony hilazako hoe manao fanatanjahan-tena na mihinan-kanina be loatra, fa ny marina, ny fomba lanjanay ny lanjantsika dia tsy manao fanatanjahan-tena sy mihinan-kanina isika ary raha mifikitra amin'ny drafitry ny sakafo ianao dia manatona ny dokoteranao ary manantona ny sakafo ara-tsakafo ianao, dia hataony antoka fa mihinana ny fatra sahaza anao ianao. Fantatro izao fa ny aretinao mihinana dia milaza fa be loatra izany, manery anao hihinana tafahoatra, minoa ahy, tsy dia be loatra izany.
Niasa tany amin'ny toeram-pitsaboana aretin-tsaina nandritra ny taona maro aho ary nikasa ny hihinana satria izany no ataonao rehefa eo ianao ary noana foana aho satria hihinana bebe kokoa ny tenako, okay? Fantatro fa tsy mino ahy ianao fa indraindray manampy fotsiny ny mihorakoraka azy ary milaza aminao fa be loatra izany, maninona aho no mbola mihabetsaka, miakatra ny BMI ary tsy mahazo aina aho, sa tsy izany? Matokia ahy fa fantany izay ataon'izy ireo, ataony foana izy ireo, izy ireo 'Nandehanako tany an-tsekoly ho an'ity, nanao an-jatony aman'arivony maro izy ireo ary tsy hahatonga anao hitombo lanja. Fantatro fa sarotra izany ary fantatro hoe rahoviana isika no hahatratra ny faran'ny fampiakarana lanja ary ao anatin'izany sehatra mahasalama izany no nilazan'izy ireo taminay mba hikendry ny tsy fihinananay hisakafo ary toa izany, izany no zava-dehibe, andriamanitro ry zareo hampatavy anao ary kamo ianao ary. .. Manomboka milaza amintsika ireo zavatra mahatsiravina rehetra ireo izy, mihiaka ireo lainga ireo, sa tsy izany? Ary ity no fotoana ilantsika hiverina any amin'ny bokiko, laharana voalohany.
Miresaha amin'ity feo ity satria raha tsy izany dia hilaza aminao foana izy io ary tena tsy azontsika itokisana izy, fantatro fa mahatsiravina ity ary hatoky anao ela ity Feo iray ity, fa jereo ny nitondrany antsika, marina? Tsy aiza akory no tadiavintsika ary tokony hatoky ny ekipantsika isika. Tsy hampiala anao amin'ny lanja foana izy ireo. Mametraka ny vatanao amin'ny faritra salama ianao mba hanana saina sy vatana salama, ary afaka mampiditra fanazaran-tena mahomby amin'ny fampihetseham-batanao ianao mba ho aretim-po sy fo ara-tsaina ary tsara ny vatantsika, tsara ny herinay.
Izany no tokony hatao, marina? Ary fantatro fa tena sarotra izany ary fantatro fa tsy maintsy hiadianao io, fa indraindray kosa mila miverina manondro ny iray isika ary mila miady amin'io feo io satria hiseho mandritra ny fanarenana antsika izany rehefa manaraka ireo dingana ireo sy ireo Make fiovana, okay? Fantatro fa tena henjana tokoa amin'ity fomba ity ary maro aminareo no mbola hanana fanontaniana, fa ho an'ireo izay efa sitrana kosa dia mba zarao ny tantaranao, ampahafantaro ahy hoe nanao ahoana izany ho anao sy ny fomba nandalovanao izany. Rehefa tratranao ny fihenan-tsasatra amin'ny fahasitrananao ary hitanao fa fantatry ny ekipanao ny zavatra nataon'izy ireo ary eny, mihombo tokoa ny aretin-tsakafo, saingy mampanantena aho fa ho tsara kokoa ianao. Avelao aminay ny torohevitrao momba ny fahombiazana sy ny tetika ary ny toy izany, satria fantatro fa tena sarotra izany, saingy matokia ny ekipanao, matokia ny vatanao, fantany izay ilainy, tsy hiakatra fotsiny io, mampanantena aho fa efa nanao im-betsaka hita maso ok? Ka raha manana ahiahy ianao, antsoy ny mpitsabo anao, antsoy ny mpitsabo anao, antsoy ny dokoterao, manaova fotoana, miresaka amin'izy ireo, angamba, raha mila io toky kely io ianao nefa fantaro fa hanampy anao hanana saina salama izy ireo ary ny vatana, okay.
Tiako ianareo rehetra ary ho hitako ianareo rahampitso ary ho eo amin'ny twitter aho rahampitso hahafahanao mametraka ny fanontanianao, # katyfaq.
Inona no mahatonga ny fitomboan'ny lanjan'ny vehivavy haingana?
Matetika dia noho ny fihazonana ranoka, ny fitomboana tsy ara-dalàna, ny fitohanana na ny fitondrana vohoka. Tsy fanahy inianamitombo lanjamety ho vanim-potoana, mitohy, nahaingana. Indraindray tsy fanahy inianamitombo lanjamisy fluctuations mahazatra aolanja. Ohatra iray tsy nahymitombo lanjadia traikefa mandritra ny boriborin'ny volan'ny vehivavy.
Fa maninona aho no mahia manify nefa mavesatra kokoa?
Ny maha samy hafa azy dia ny hozatraBebe kokoamatevina noho ny tavy, izay midika fa kely kokoa ny habaka ilainy. Na izany aza, mitovy habe amin'ny hozatra ihanyBebe kokoanoho ny tavy matavy iray ihany, izay mety hanazava ny antony mahatonga anaomiseho manify fa milanja kokoa.11 Apr 2018
Maninona aho no tsy mampihena lanja amin'ny kaloria 1200 isan'andro?
Ny fikarohana sasany dia manolotra izany koamampihena ny lanja diamihoatra nykaloriaolona mandany sy mandoro. Mety hanova ny tahan'ny fandoroany ny vatanakaloriamiankina amin'ny isanykaloriaolona mihinana. Noho izany ny olona amin'ny aDiary 1 200 kaloriamety handoro ny vitsy amin'izy ireo. izanyafakamorafihenan-danja.
'Tavy mahia”Dia teny iray milaza ny fananana isan-jato isan-jaton'ny vatanamatavyary ny habetsaky ny hozatry ny hozatra, na eo aza ny fananana «normal» BMI. Ny olona manana an'io vatana io dia mety atahorana hihombo amin'ny diabeta sy aretim-po.8 Jun 2021
Ahoana ny fihoaran'ny lanjanao?
Mitombo lanjamitranga rehefaianareomihinana kaloria matetika kokoa noho nyianareoampiasaina amin'ny alàlan'ny fiasan'ny vatana ara-dalàna sy ny fampihetseham-batana. Fa ny fahazaran-dratsy mahatonga anaomitombo lanjatsy hita miharihary. lasa tsylanjadia midika hoe mihinana kaloria kely kokoa ary mandoro angovo bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampihetseham-batana.
Inona ny voankazo mampiato ny fitomboan'ny lanja?
Akondro. Raha heverina ho sakafom-pisakafoanana mialoha na aorian'ny fampihetseham-batana tonga lafatra, ny akondro dia mahasalama kokoa noho ny ankamaroan'ny bara misy angovo, izay matetika misy siramamy sy zavatra simika maro. Na dia karbôna 27 grama aza ny salan'isa antonony, nyvoankazoafaka manampyajanony ny fahazoana mavesatrasatria tsy manana afa-tsy 105 kaloria sy fibre famenoana telo grama.9 Apr 2019
Fa maninona aho no tsy mampihena lanja na dia manao fanatanjahan-tena aza?
Miankina amin'ny sakafo nohaninao izany, ary ny hormona koa dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny habetsaky ny rano tazomin'ny vatanao (indrindra amin'ny vehivavy). Azo atao koa ny mahazo hozatra amin'ny fotoana tsy ampoizinaovery tavy. Fahita izany indrindra raha vao nanomboka ianaomampihatra.
Inona no mahatonga ny olona hahazo lanja be?
Ny fepetra hafa, toy ny diabeta sy ny soritr'i Cushing, dia mifandraika amin'ny fitomboan'ny lanja ihany koa, noho izany dia zava-dehibe ny fahazoana ny diagnostika mety amin'ny mpitsabonao. Inona koa, ny fanafody sasany, ao anatin'izany ny fanafody antidepressant sy antipsychotic, dia mety hitarika fitomboan'ny lanjany.
Rahoviana no tsy misy ifandraisany amin'ny fahasalamana ny fampiakarana lanja?
Rehefa tsy misy ifandraisany amin'ny toe-pahasalamana ny fihenan-danja, dia ao anatin'izany ny antony mahazatra: Izay mahatsapa fiakarana haingana izay tsy noho ny iray amin'ireo antony voalaza etsy ambony na misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fiainany dia tokony manatona dokotera. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia ianaro ny antony 11 mety ho antony mahatonga ny fitomboan'ny lanjany haingana sy ny zavatra tokony hatao momba azy ireo.
Inona no tokony hataoko raha mahatsapa aho fa mihabe lanja?
Raha manahy momba ny fihenan-danja ianao dia miresaha amin'ny dokotera. Mandritra izany fotoana izany, alao antoka fa manaraka sakafo mahasalama sy voalanjalanja ianao. Vakio ny antony 9 momba ny fitsaboana amin'ny lanjanao. Ny fikarohana sasany dia manondro fa ny tsy fahampian'ny torimaso dia afaka manampy amin'ny fitomboan'ny lanja.